ဝိနည်းကို တန်ဖိုးထားသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သံဃာတော်များ မဟာဝိဟာရ ဓမ္မဝိနယတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရေ?? - Yangon Media Group
ဝိနည်းကို တန်ဖိုးထားသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သံဃာတော်များ မဟာဝိဟာရ ဓမ္မဝိနယတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရေ??
ဝိနည်းကိုတန်ဖိုးထားသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သံဃာတော်များအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် မဟာဝိဟာရဓမ္မဝိနယတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်ပြီး ဘီအေဝိနယဘွဲ့ ရယူနိုင်ပြီဖြစ် ကြောင်း တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းသား ရေးရာဌာနမှသိရသည်။
”ဝိနည်းကိုတန်ဖိုးထား လေးစားလိုက်နာချင်တဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသံဃာတော်တွေအတွက် ဒီတက္ကသိုလ်ကတကယ့်ကိုကောင်း ပါတယ်။ ပေးတဲ့ဘွဲ့ကလည်း ဘီအေဝိနယဘွဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတက္ကသိုလ်ကို ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကနေ တက္ကသိုလ်ဖွင့်ထားတာ။ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်တို့ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားသား သံဃာတွေလည်း လာရောက်တက်ကြပါတယ်။ ဒီတက္ကသိုလ်မှာတက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဝိနည်းကိုအဓိကထား လိုက်နာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စာသင်ချိန်တွေမှာလည်း ဖုန်းပေးကိုင်မှာမဟုတ်သလို ဝိနည်းကို တတ်နိုင်သမျှထိန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု တက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းသားရေးရာဌာန မော်ကွန်းထိန်းဦးကိုကိုနိုင် က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မေ ၂၂ ရက်က ပြောသည်။
အဆိုပါတက္ကသိုလ်တွင်အကြို ဒီပလိုမာ၊ ဒီပလိုမာ၊ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့ လွန်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ထား မည်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် ပညာသင်နှစ်အတွက်သင်တန်းများကို ဇွန်လအတွင်း ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ”မဟာဝိဟာရဓမ္မဝိနယတက္ကသိုလ် ဇွန်လမှာ ၂ဝ၁၈- ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် အတန်းသစ်တွေ ဇွန်လမှာဖွင့်မယ်။ ဝင်ခွင့်စစ်ပြီးသွားပြီ။ ဝင်ခွင့်အောင်တဲ့ သံဃာတော်တွေ တက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီပလိုမာကအောင်ပြီး တော့ ဝင်ခွင့်မလိုပဲတက်ခွင့်ရှိတဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ်။ ဒီပလိုမာမှာ တစ်ဘာသာချင်းစီအမှတ် ပျမ်းမျှ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်တဲ့ ကိုယ်တော် တွေ တက်ခွင့်ရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ မဟာဝိဟာရဓမ္မဝိနယ တက္ကသိုလ်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ် ဘိုးဒေါန ကုန်းကျေးရွာအနီးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး တက္ကသိုလ်ကို သီလသုတစွယ်စုံရသော ပညာရှင်ရဟန်းသံ ဃာတော်များပေါ်ထွန်းလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
စပိန်တွင် ကိုကင်း ကီလို ၉ဝဝ နှင့် လူ ၁ဝ ဦးကို ဖမ်းမိခဲ့
လ ၂ဝ အတွင်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးတွင် အမှုကြီး ရှစ်သောင်းကျော်ကို ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ ဟု??
Girls’ Generation အဖွဲ့မှ ထဲယွန်၏ တစ်ကိုယ်တော် သီချင်းခွေ မကြာမီ ထွက်ရှိမည်